Onu ahia uzo di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche na ndi ozo | YiZheng
Groove Comdị Composting Turner Igwe eji na gbaa ụka nke organic n'efu dị ka anụ ụlọ na ulo ozuzu okuko, sludge n'efu, sugar osisi nyo apịtị, dross na ahịhịa sawdust. A na-ejikarị ya eme ihe na ahịhịa fatịlaịza na osisi fatịlaịza maka ịgba ụka.
Kedu ihe bụ Groove Type Composting Turner Machine?
Groove Comdị Composting Turner Igwe bụ igwe akụrụngwa na akụrụngwa eji eme ihe. Ọ na-agụnye uzo shelf, na-eje ije track, ike collection ngwaọrụ, mbịne akụkụ na nyefee ngwaọrụ (tumadi eji maka multi-tank ọrụ). Akụkụ ọrụ na-arụ ọrụ nke igwe na-atụgharị compost na-agbaso nnyefe nke igwe dị elu, enwere ike ibuli ma ghara ibuli ya. Liftdị ebuli elu na-akachasị eji rụọ ọrụ na ntụgharị obosara nke na-akarịghị mita 5 na ntụgharị miri emi karịa mita 1.3.
Kedu ihe ejiri Groove Type Compost Turner mee?
(1) Groove ụdị composting Turner eji maka gbaa ụka nke ihe mkpofu ahihia dika anumanu na ulo ozuzu okuko, sludge dumpling, sugar plant filter mud, dross achicha nri na ahihia sawdust.
(2) Tụgharịa ma kpalie ihe dị na tank ahụ gbaa ụka ma laghachi azụ iji kpọọ nsonaazụ nke ịtụgharị ọsọ ọsọ na ọbụnadị na-akpali akpali, ka ị wee nweta mmekọrịta zuru oke n'etiti ihe na ikuku, nke mere na nsị nke ihe omume ahụ ka mma.
(3) Groove ụdị composting Turner bụ akụrụngwa akụrụngwa nke comero na-arụ ọrụ nke ikuku. Ọ bụ ngwaahịa ndị bụ isi na-emetụta usoro mmepe nke ụlọ ọrụ compost.
Mkpa nke Groove ụdị composting Turner site na ọrụ ya na imepụta compost:
1. gwakọta ọrụ nke dị iche iche Efrata
Na mmepụta fatịlaịza, a ga-agbakwunye ụfọdụ ihe inyeaka iji dozie usoro carbon-nitrogen, pH na ọdịnaya mmiri nke akụrụngwa. Isi akụrụngwa na ngwa na-Olee ihe enyemaka stacked ọnụ, nzube nke edo inggwakọta nke dị iche iche ihe nwere ike nweta mgbe mbịne.
2. Mechie ọnọdụ okpomọkụ nke akụrụngwa ikpo.
Enwere ike iweta nnukwu ikuku ọhụụ wee kpọtụrụ ya na akụrụngwa na ngwakọta agwakọta, nke nwere ike inyere microorganisms aerobic aka iwepụta ọkụ gbaa ụka ma mee ka ikpo ikpo ikpo ọkụ dị ọkụ, na ikpo ọkụ ọkụ nwere ike ịjụ oyi site na njuputa nke ọhụụ ikuku. Ya mere, nke ahụ bụ ọnọdụ nke ntụgharị nke ọkara-okpomọkụ-okpomọkụ-okpomọkụ, na nje dị iche iche microbial bara uru na-eto ma na-amụba ngwa ngwa n'oge oge okpomọkụ.
3. Meziwanye permeability nke akụrụngwa ikpo.
Na uzo ụdị composting Turner nwere ike hazie ihe n'ime obere iberibe, na-eme ka ihe onwunwe ikpo oké na kọmpat, N'ụbọchị nke abụọ, na-agbanwe, akpụ a kwesịrị ekwesị porosity n'etiti ihe.
4. Mezie mmiri nke akụrụngwa ikpo.
Mmiri mmiri kwesịrị ekwesị nke akụrụngwa gbaa ụka bụ ihe dị ka 55%. Na gbaa ụka nke ọrụ ntụgharị, mmeghachi omume biochemical na-arụ ọrụ nke microorganisms aerobic ga-eweta mmiri ọhụrụ, na oriri nke akụrụngwa site na microorganisms na-eri oxygen ga-emekwa ka mmiri tufuo onye na-ebu ya ma pụọ. Ya mere, site na usoro njikọ fatịlaịza, mmiri ga-ebelata n'oge. Na mgbakwunye na evaporation kpụrụ site okpomọkụ omume, na-atụgharị ngwaọrụ ga-etolite manye mmiri vepo emission.
Ngwa nke igwe na-atụgharị Groove Type Turner Machine
1. Ọ na-eji gbaa ụka na mmiri mwepụ arụmọrụ ke organic fatịlaịza osisi, compound fatịlaịza osisi, sludge n'efu ụlọ mmepụta ihe, ugbo ugbo na ero n'ugbo.
2. Kwesịrị ekwesị maka ịgba ụka aerobic, enwere ike iji ya na ọnụ ụlọ gbaa ụka nke anyanwụ, tankị gbaa ụka na ndị na-agbanwe.
3. Ngwaahịa enwetara site na nnukwu okpomọkụ aerobic gbaa ụka nwere ike iji mee ka ala mma, ubi greening, landfill cover, wdg
Isi ihe iji chịkwaa ntozu okè
1. Iwu nke carbon-nitrogen ruru (C / N)
C / N kwesịrị ekwesị maka ire ere nke ihe ndị ọzọ site na microorganisms izugbe bụ ihe dị ka 25: 1.
2. Njikwa mmiri
A na-achịkwa nhichapụ mmiri nke compost na mmepụta n'ezie na 50% ~ 65%.
3. Njikwa ventilashion compost
Izu ikuku oxygen ekupụ bụ ihe dị mkpa maka ọganiihu nke compost. Ekwenyere n'ozuzu ya na ikuku oxygen dị na ikpo ahihia kwesịrị ekwesị maka 8% ~ 18%.
4. Njikwa okpomọkụ
Okpomọkụ bụ ihe dị mkpa na-emetụta ọfụma nke microorganisms nke compost. Mmiri gbaa ụka nke compost-okpomọkụ dị elu bụ 50-65 degrees C, nke bụ usoro a na-ejikarị eme ihe ugbu a.
5. Acid salinity (PH) njikwa
PH bụ ihe dị mkpa na-emetụta uto nke microorganisms. PH nke ngwakọta compost kwesịrị ịbụ 6-9.
6. Njikwa isi uto
Ka ọ dị ugbu a, a na-eji microorganisms eme ihe ọzọ.
Uru nke Groove Type Composting Turner Machine
(1) The gbaa ụka tank nwere ike atara nọgidere ma ọ bụ buru ibu.
(2) efficiencyrụ ọrụ dị elu, ịrụ ọrụ dị mma, siri ike ma dịgide.
Groove Comdị Composting Turner Model Nhọrọ
Na-agagharị Speed ​​（m / min）
Ike (m3 / h)
Nke gara aga: China N'ogbe gbaa ụka Compost Equipment - Self-propelled Composting Turner Machine - YiZheng
Osote: Chain efere Compost agbanye